Vitamin Dမှ သက်ကြီပိုင်း အရွယ်များ၏ ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုပုံ | Ensure
Vitamin Dမှ သက်ကြီပိုင်း အရွယ်များ၏ ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုပုံ
ယနေ့နေသာသောနေ့ဖြစ်သည် တက်ကြွလန်းဆန်းပြီး ဗီတာမင်Dဓာတ်တွေရစေဖို့ အပြင်ထွက် လမ်းလျှောက်ရအောင်ဆိုသည့် စကားများက နွေရာသီ (သို့) နေသာသော နေ့များတွင် သင်ပုံမှန် ကြားရသည့် အသံများဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် နေရောင်ခြည်သည် သင့်အား ဗီတာမင်ဓာတ်များကို တိုက်ရိုက်မထောက်ပံ့ပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များနှင့် ထိတွေ့မှုကြောင့်သာဗီတာမင်Dကိုထုတ်လုပ် ခြင်းဖြစ်သည်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအသည်းနှင့်ကျောက်ကပ်သည် ဓာတ်မပြုရသေးသော ဗီတာမင် D ကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကယ်လ်ဆီယမ်စုပ်ယူမှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဘာကြောင့် သက်ကြီးပိုင်းအရွယ်များက ပိုကောင်းသည့် ကယ်လဆီယမ် စုပ်ယူမှုလိုအပ်ပါသလဲ? အကြောင်းအရင်းမှာသင်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ အရိုးအစားထိုးမှုကနည်းပါးလာပါသည်၊ ထို့နောက်အရိုးပွရောဂါဖြစ်များ (စိမ့်ဝင်နိုင်သော အရိုးများ) ရလာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သက် ကြီးပိုင်းအရွယ်တစ် ဦး ၏သွေးထဲတွင် ဗီတာမင်Dဓာတ် ပိုများလာလေလေ၊ ထိုသူ၏အရိုး၊ ကြွက်သားများတိုးတက်လာလေလေဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်လုံလောက်သော ဗီတာမင်Dဓာတ်မရလျှင် သွေးထဲတွင် ကယ်လ်ဆီယမ်နှင့် ဖော့စဖောရက်ပါဝင်မှုလျော့ကျစေပြီး သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည် အရိုးများမှ ကယ်လ်ဆီယမ်အလွန်အကျွံထုတ်ယူခြင်းအားဖြင့် ဗီတာမင်Dဓာတ်ရရှိစေရန် အဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်း စေပါသည်။
မည်သည့်အချိန်တွင် ဗီတာမင်Dဓာတ်ကိုလုံလုံလောက်လောက် သင်မရရှိတော့သည်ကို မည်သို့သိရှိနိုင်သနည်း? သင်မည်သို့ ပိုမိုရရှိအောင်ယူနိုင်မည်နည်း?
နေရောင်ခြည်ရရှိမှု မလုံလောက်ခြင်းသည် သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် ဗီတာမင်Dဓာတ်ချို့တဲ့မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် တစ်ခုတည်းသောအရာ မဟုတ်ပါ။ ဒီမှာသတိထားရမည့် အချက်များမှာ –
သင့်တွင် Vitamin D လုံလောက်သောပမာဏ မရှိသည့်အချက်နှင့် အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ခြေလက်အင်္ဂါများ အထူးသဖြင့် ခြေထောက်များ လေးလံနေမှုကို သင်မကြာခဏခံစားရလေ့ရှိပြီး လှေကားထစ်များကို တက်ရန်ခဲယဉ်းပြီး၊ ထိခိုက်နိုင်ခြင်းနှင့် ကျိုးပဲ့ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ Vitamin D သည် ကောင်းသောသွေးလည်ပတ်မှုနှင့် ကယ်လ်ဆီယမ်စုပ်ယူမှုများ၊ ကြွက်သားများ၊ အရိုးများနှင့် သွားများ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ပါသည်။
၂။စိတ်အပြောင်းအလဲများ၊သိမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများ
အသက်ကြီးသူများ သို့မဟုတ် မည်သူမဆို ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည်ဟု ခံစားရသောအခါ ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် အစာမစားမိခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေဓာတ်ပြည့်ဝမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဟု မကြာခဏစဉ်းစားတတ်ကြသည်။ သို့သော် ဗီတာမင်D ဓာတ်မလုံလောက်ခြင်းကြောင့်ဟု မစဥ်းစားမိကြချေ။ ဤဗီတာမင်Dဓာတ်သည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် တက်ကြွဟော်မုန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး စိတ်ခံစားမှု(Dopamine နှင့် Serotonin ပမာဏ)နှင့် ခုခံအားဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ပမာဏမလုံလောက်ပါက သက်ကြီးပိုင်းအရွယ်များသည် သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများ၊ အဆစ်များ၌နာကျင်ခြင်း၊ နံရိုးများတွင်နာကျင်မှုဝေဒနာများနှင့် အမြဲပင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည်ဟု ခံစားရနိုင်သည်။ သင်သည်အပြင်သို့မကြာခဏ မထွက်နိုင်ပါက ဗီတာမင် Dဓာတ်အား အစားအစာများမှတဆင့် ရယူနိုင်သည်။
နေရောင်ခြည်ရရှိနိုင်ရန် ပြတင်းပေါက်ဝတွင် ထိုင်နေရုံနှင့်မရပါ။ Vitamin Dဓာတ်ဖြစ်ပေါ်ရန် UVB ကိုလိုအပ်သည်။ သို့သော်ပြတင်းပေါက်များမှ စီးပွားဖြစ်မှန်များ၏ ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် လိုအပ်သော ဗီတာမင်ဓာတ်များကို မရရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်တစ်နေ့လျှင် ပြင်ပမှတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် ၁၀ မိနစ်ခန့်ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အစားအစာထဲမှာဆိုလျှင် ဗီတာမင်D ဓာတ်အချို့ကို ဆော်လမွန်၊ ကြက်ဥအနှစ်၊ ထူးခြားရှားပါးသည့် ဓားရှည်ငါးနှင့်နို့၊ ဖျော်ရည်၊ စီရီရယ်သို့မဟုတ် Ensure Gold ကဲ့သို့သော ဖြည့်စွက်အစားအစာများမှ ရရှိနိုင်သည်။ ကြွက်သားများကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့် လူကြီးများတွင်အာဟာရကွာဟချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ဗီတာမင် နှင့်သတ္တုဓာတ် ၂၈မျိုး၊ ၃ဆပိုသော Vitamin D နှင့် HMB (Hydroxyl methyl butyrate) တို့ဖြင့်ဖြည့်စွက်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကို ပုံမှန်ဖြစ်စေရန် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များက အကြံပြုထားသည့် ခွန်အားနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် လေ့ကျင့်မှုများနှင့်အတူ ဗီတာမင် D ၏လုံ လောက်သောပမာဏသည် သက် ကြီးပိုင်းအရွယ်များ၏ ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။